Kemerovo State University - Higher Education na Russia
Echefukwala -atụle Kemerovo State University
Debanye aha na Kemerovo State University
Ugbu ndị Kemerovo State University (hassock) – otu n'ime ndị kasị ibu mahadum nke West Siberia, a so na Yurop, Association of Universities – -enye trainig ukwuu ruru eru ọkachamara na a dịgasị iche iche nke ubi.
Ugbu a na KemSU na alaka ya na-enye: 20 Master mmemme, 33 Bachelor si mmemme, 37 specialties, 6 specialties nke abụọ ọkachamara ọzụzụ.
KemSU na-agụsị akwụkwọ na-arụ ọrụ n'ụlọ akwụkwọ, kọleji, institutes, nnyocha sayensị emmepe, na ndị mmanye iwu na ikpe ozu, ke azụmahịa oru, anoghi n'ulo oba, na na-eduga aku alaka nke ma ndị region na Russia.
The University mgbagwoju agụnye 5 alaka na umu-obodo-: Anzhero-Sudzhensk, Belovo, Novokuznetsk, Prokopievsk, Yurga.
The isi University-agụnye 12 ikike iche:
anụ ahụ Faculty,
Faculty of Political Science na Sociology,
Faculty of History na International Relations,
Faculty of Iwu,
Faculty of Philology na Journalism,
Faculty of Romance na Germany Philology,
Faculty of Physical Ọzụzụ na Sports,
The ezi mma nke ọzụzụ dabeere na elu na-ụbọchị akụrụngwa na agụmakwụkwọ na izi ihe mkpara, gụnyere n'elu 130 Dọkịta nke Science na ndị ọkachamara, n'elu 600 Aga ime nke Science na osote prọfesọ, 15 Naa Ọrụ dị iche iche na ngalaba nke ihe omume.
The KemSU enịmde isi na Applied Research dị iche iche ubi nke sayensị, ụlọ ọrụ, akụ na ụba mba na elu ụlọ akwụkwọ. Ugbu e nwere 30 reputable na nkà mmụta sayensị na ụlọ akwụkwọ, 12 isi na nkà mmụta sayensị ubi na Mahadum. Na okpokolo agba nke mmejuputa iwu-nke Programme of guzobe nke KemSU innovational-ajụ (2010-2012) na University Scientific Innovative Mgbagwoju e kere, e meghere: abụọ na nkà mmụta sayensị na ngwá nkịtị ojiji emmepe, -okoro azụmahịa àkwá «akwadoghị akwado», ndị Center of Innovative Competencies Development. N'ime 30 arịa amamihe ihe e debara aha ha n'akwụkwọ. Dị ka nke September 2011, 17 obere otutu ụlọ ọrụ meghere.
Kwa afọ na KemSU na alaka ya esetịpụ 20-25 scientifc nzukọ, gụnyere kacha nta 10 – nke niile-Russian na mba na-etoju.
kwa afọ banyere 4000 KemSU na-eme nnyocha’ na nkà mmụta sayensị akwụkwọ (akwụkwọ na Abstracts) egosi, nakwa dị ka ihe dị 250 ihe nke akwụkwọ, monographs, collections, muta akwụkwọ na akwụkwọ ntuziaka.
The nyere na KemSU «Bulletin of the Kemerovo State University» ebe ọ bụ na October 2010 e gụnyere n'ime ndepụta nke «na-eduga ndị ọgbọ na-enyocha magazin na mbipụta, nke kwesịrị na-ebipụta isi nnyocha pụta dissertation-arụ ọrụ maka agụmakwụkwọ degrees nke Doctor na nwa akwukwo nke Science »site Higher Àmà Commission.
Otu n'ime ndị kasị ibu na mpaghara mahadum na nkà mmụta sayensị ọba akwụkwọ e dere ihe banyere 1 nde akwụkwọ Russian na-asụ asụsụ ọzọ. Ya dị ukwuu na ngwaahịa na-agụnye izi, na nkà mmụta sayensị ndị e ji amụ, akụkọ ifo na periodicals, nakwa dị ka obere mbipụta na collections nke akwụkwọ site maara nke ọma ndị ọkà mmụta sayensị.
The Kemerovo State University bụ otu n'ime ndị mbụ na Russia ike na ịzụlite na mpaghara ọmụma akụrụngwa maka agụmakwụkwọ na sayensị. The University akụrụngwa na-agụnye a elu-ọsọ na kọmputa na netwọk wuru na isi nke Center of New Information Technologies. na 2008 ndị Data Center E mepere, nke a kwadebere n'ụzọ na ike- na software si n'ụwa eduga Nsukka na-emezu ihe nile a chọrọ n'aka kpọmkwem maka oge a data nhazi na nchekwa emmepe na Internet. The Wi-Fi mpaghara na-arụ ọrụ na University ụlọ.
E nwere ihe karịrị 40 multimedia ụlọ mgbakọ inye klas na ojiji nke ọhụrụ ozi teknụzụ na KemSU (isi mahadum). The elu-ụbọchị ngwá na-etinyere maka videoconferences na telebridges, ndụ Broadcasting dị ka n'ime ọnụ ụzọ nke University, otú na òtù na òtù na Russia na mba ndị ọzọ.
The post-gụsịrị akwụkwọ na ọmụmụ na 40 specialties na doctoral ọmụmụ na 7 specialties na-arụ ọrụ na KemSU. Enwere 7 Dissertation Councils on agbachitere dọkịta na nwa akwukwo si adian na Mahadum, nāgughi – 5 nkwonkwo councils na isi nke ọzọ na izi na nkà mmụta sayensị òtù.
Kwa afọ, University kọwakwuru ya mba mmekorita na azụmahịa mmekọahụ. Enwere 32 contracts ke odudu na mahadum na òtù si Germany, France, Belgium, USA, toro toro, Finland, PRC, Mongolia, CIS na obodo ndị ọzọ. Ụmụ akwụkwọ na nkụzi nwere ohere ịmụ ihe na ịrụ ọrụ na inyo m enyo na elu-ugwu mba ọzọ na mahadum. Ya n'aka ndị University kwa afọ na-na ọbịa si mba ọzọ n'ihi inyo m enyo, nkuzi, -ejide nke nzukọ ọmụmụ.
-Adịgide adịgide mgbanwe nke ụmụ akwụkwọ na-kwetara na Marie Haps Free University (Brussels, Belgium), na Lessius University College (Antwerp, Belgium), na Higher International School of Commerce and Development (EICD3A) (Lyon, France), etc.
Kwa afọ on Ntuziaka si RF Ministry of Education na Science nke University-ekweta, sị ụmụ akwụkwọ si CIS mba. Ugbu banyere 50 ụmụ amaala nke CIS mba na-amụ dị iche iche ikike iche nke KemSU maka agụmakwụkwọ ka elu.
N'ihi na mma accessibility na-elu-edu azụmahịa mmụta Mahadum Business School na meghere maka ụmụ akwụkwọ na ndị nnọchiteanya nke azụmahịa obodo nke region.
The Center of Learning Foreign Asụsụ ọrụ na KemSU enye ọmụmụ na-amụta English, German, French, Czech, Dutch, Arabic, Italian, Chinese niile comers.
The Inter-alaka Regional Center of Professional Advanced ọzụzụ na mmughari-enye mmughari na ọmụmụ nke ụzọ ọzụzụ on a dịgasị iche iche nke ubi na ntọhapụ nke ala-ghọtara akwụkwọ.
The Kemerovo State University bụ agụmakwụkwọ isi n'ihi na mmejuputa iwu-nke Presidential omume nke management ọzụzụ maka òtù na akụ na ụba mba nke Russian Federation.
The usoro nọgidere na-akụziri ọrụ nke ọma. On a na-adịgide adịgide ndabere na KemSU akwado 89 general mmụta oru nke Kuzbass. The University nkụzi na-enye pụrụ iche ọmụmụ na ọmụmụ nke enwekwukwa achị amụ ihe maka ụlọ akwụkwọ ụmụ akwụkwọ. N'ihi na onyinye dị iche ụmụ ndị Center nke Nga University Ọzụzụ na-agba nzukọ, olympiads, kwa afọ esetịpụ utọ na okpomọkụ na ụlọ akwụkwọ na òkè nke University na-eduga ndị ọkà mmụta sayensị. Jikotara aka wee na ndị Administration nke Region, Ngalaba Education na Science nke Kemerovo Region, na University eguzobewo Regional Center maka Work na nkà Children na-abụghị ọchịchị nzukọ «Assembly nke Stars». Ya na ndị òtù na-ụlọ akwụkwọ leavers – mmeri na ọgba ọsọ-nke na-Russian na mpaghara olympiads on dị iche iche na-achị.
The University na-mejuputa atumatu elekọta mmadụ oru ngo «My mahadum - ezinụlọ m» lekwasịrị anya nile-gburugburu mmepe nke ụmụ akwụkwọ’ iche. N'ime 30 mkpakọrịta arụ ọrụ na Mahadum: studio nkiri «Vstrecha», -egwú otu «Vtoraya Parallelnaya», ìgwè nke Club nke Funny na-echepụta, Ọmụmụ Korọs, studio «Art-Olu», etc.
The ememme nke ụmụ akwụkwọ’ creativity «Mbụ Snow» na «Student opupu»-ebe kwa afọ.
E nwere ụlọ ọrụ na-aga n'ihi na-azụ ahụ na sports. The egwuregwu na mma mgbagwoju agụnye 3 gyms, a ski ọbịa na-ebi, a njem nleta ụlọ ọgbakọ, na prophylactic sanatorium «Vita», a N'ọgbụgba égbè nso, a cheesi club, etc. E nwere egwuregwu ngalaba on basketball, volleyball, minifootball, track-na-na ubi egwuregwu, powerlifting, mma aerobics, etc.
Ọrụ nke KemSU nnyocha ìgwè na-ọdịda na atọ RF Government Nrite maka muta. na 2007 na University merie ndị mba award «European Quality» – n'ihi mgbalị iji nweta elu àgwà nke mmụta ya ọrụ dị na European ụkpụrụ. na 2009 na University e gosiri na Quality Certificate na ihe e dere ede nke Honour.
The KemSU esetịpụ ike n'etiti ọnọdụ dị iche iche ratings. Dị ka data site na onwe gị n'ụlọnga «RateOR» na 2009 na University sonyeere n'ohu 50 kasị mma Russian oru nke elu-akụziri na citedness nke nkà mmụta sayensị na akwụkwọ (na Hirsch index), na mba nke na nkà mmụta sayensị na akwụkwọ ọrụ nke Russian oru nke elu-akụziri maka oge tupu 2010 ọ were 87 -edebe n'etiti 500 kasị mma oru nke Russia. Na mba fim bụ maka nke Russian oru nke elu-akụziri na afọ-ọgwụgwụ 2010 na KemSU were 53-56 ebe (n'etiti 104 kasị mma Russian oru).
Department nke ngalaba nke Biology (CF)
Department of botani
Department of anụmanụ na Ọmụmụ ihe dị ndụ
The ngalaba nke mmadụ physiology na ndụ na nchekwa
Department of Jenetik
Geology na Geography Department
UNESCO oche na Information Technology Computing
Isi Mathematics Department
Department of elekọta mmadụ na psychological ngalaba (SPF)
Department of Social Psychology na Psychosocial Technologies
Department of General Psychology na otito Psychology
Department of Social Ọrụ na-elekọta mmadụ management
Department nke ngalaba nke Chemistry (HF)
Department of Gbasara nyocha na Inorganic Chemistry
Department of Organic na nke Nkịtị Chemistry
Department of Solid State Chemistry na Chemical Materials
Ngalaba nke ngalaba nke History na International Relations (FIiMO)
Department nke akụkọ ihe mere eme nke mmepeanya na socio-omenala nkwukọrịta
Department of Modern, Contemporary History na International Relations
The ngalaba nke mba akụkọ ihe mere eme
Isi-adịbeghị anya Russian akụkọ ihe mere eme
Department of Economic Theory na Ọha nchịkwa
Ngalaba nke ngalaba nke Romance na Germany Philology (FRGF)
The Department of Translation na Linguistics
Ngalaba nke ngalaba nke Political Science na Sociology (FPNiS)
Department of usoro iwu Physics
Department of Na Physics
Ngalaba nke ngalaba nke Philology na Journalism (FFiZh)
Department of History na Theory nke Literature na akụkọ ifo
The oche nke stylistics na ihapu otutu okwu
The Department of Journalism na Russian akwụkwọ nke ogbo nke iri abua
Ngalaba nke ngalaba nke Nkịtị Education na Sport (FFiS)
Department of usoro iwu ntọala nke anụ ahụ omenala
Department of Biomedical ntọala mmụta mmega ahụ na egwuregwu sayensị
Department nke ngalaba nke Economics (Fe)
Finance na Ebe E Si Nweta Department
Department of General na Regional Economy
Department of Management aha ya bụ I.P.Povaricha
Department of Economic Theory, Taxation, Business na Iwu
Department nke Iwu Faculty (LF)
Department of State na Nlekọta Iwu
Civil Iwu Department
Department of Theory na History of State na Iwu
Department of Criminal Iwu na Mpụ
Department of Criminal Usoro na Criminalistics
The ngalaba nke oru, gburugburu ebe obibi iwu na ịgba akwụkwọ
Department of nkà ihe ọmụma
Ị chọrọ -atụle Kemerovo State University ? ajụjụ ọ bụla, comments ma ọ bụ reviews
photos: Kemerovo State University ukara Facebook
Jikọọ na-atụle nke Kemerovo State University.